Ny anana dia zavamaniry tropikaly izay misy voankazo hanina ary ny zavamaniry tena manara-penitra indrindra ao aminny fianakaviana Bromeliaceae.
Ny goavy dia zavamaniry fihinam-boa avy any amin ireo faritra manana toetanin-janapehintany any Amerika, nefa afaka maniry amin ny faritra kôntinenta hafa manana izany toetany izany ihany koa. Hazo tsy dia avo ny goavy, izay mety mahatratra 8 m. ...
Ny sakamalao na sakamalaho na sakarivo na sakaviro na sakaitany dia zavamaniry manana vahatra fampiasan ny olona amin ny sakafo mba hahazoana tsiro mafanafana. Avy any amin ny faritry ny zanapehintany any Azia io zavamaniry io. Ampiasaina ihany k ...
Voninkazo iray, izay antsoina matetika hoe voninkazo na voniny iray, dia ny firafitry ny fiterahana hita ao anaty zavamaniry voninkazo. Ny fiasanny voninkazo iray dia misy fiantraikany aminny fiterahana, mazàna aminny alàlanny mekanika ny firaisa ...
Ny landihazo na hasy dia tsiraka avy amin ny zavamaniry izay mamono ny vihin ny zavamaniry landihazo. Izany tsiraka izany dia ovaina ho kofehy mba hanamboarana lamba. Ny landihazo no tsiraka voajanahary vokarina be indrindra eto ambonin ny tany, ...
Ny voasary dia zavamaniry misy karazany maro toy ny laoranjy, ny mandarinina, ny voasarimakirana, ny pamplemosy, sns. Ny teny hoe voasary koa dia aondroana ny voan ny voasary. Voankazo miavaka amin ny ankamaroan ny voankazo hafa rehetra ny voasar ...
Ny Orkide dia anisanny zavamaniry be karazany indrindra. Misy eo aminny 25.000 eo ny karazany izay mivondrona eo aminny 800.
Ny fiteny hitita na fiteny heteana izay fantatra koa aminny hoe fiteny nesita dia fiteny indo-eoropeana izay noteneninny Hitita na Heteana taminny Andronny Alimo tao Anatolia. Ireo Hitita ireo dia namorona fanjakana lehibe ka ny ivony dia i Hatos ...
Ny fiteny ogaritika dia fiteny hamitô-semitika tsy misy mpiteny intsony izay isan ny fiteny kananeana, ao amin ny vondrona avaratra-andrefan ny fiteny semitika, notenenina tao amin ny tanànan i Ogarita tamin ny Andron ny Alimo tapany farany. Ny a ...
I Kafarnahoma na Kapernaomy dia tanana kely onenana mpanjono ao aminny faritanini Galilea, eo ampita avaratra-andrefanny farihy Tiberiada ao aminny tapany avaratry ny Fanjakani Israely. Taminny fitondranireo Hasmoneana, dia teo anelanelanny 6 sy ...
Ny Horita dia vahoaka nonina tao Azia Minora taminny Andro Taloha. Nanorina ny fanjakani Horý na Harý izy ireo taminny fiandohanny taonarivo faharoa, tao aminny faritra mifanila ao avaratri Mesopotamia.
Ny Sivàna dia volana fahatelo ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahasivy kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe סִיוָן / Sîwān na Sivan io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana May sy Jona ka misy 30 andro.
Ny Kisleva dia volana fahasivy ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahatelo kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe כִּסְלֵו / Kislēw na Kislev io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Novambra sy Desambra ...
Ny Teveta na Tebeta dia volana fahafolo ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahefatra kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe טֵבֵת‎ / Tebheth na Tevet io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Desambra sy ...
Ny Tamoza dia volana fahefatra ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahafolo kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe תמוז‎ / Tammûz io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Jona sy Jolay ka misy 29 andro.
Ny Ava na Aba dia volana fahadimy ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahiraila ambinny folo kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe אָב‎ / Av na ʾĀḇ io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Jolay sy Aogos ...
Ny Sevata na Sebata dia volana fahiraika ambinny folo ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fahadimy kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe שְׁבָט / Shevat io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Janoary s ...
Ny Elola dia volana fahenina ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana faharoa ambinny folo kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe אֱלוּל / ʾĔlûl io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Aogositra sy Septambra ...
Ny Adara dia volana faha-12 ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana fah-6 kosa ivelanny fivavahana aminny taona misy roa ambinny folo volana. Aminny teny hebreo dia atao hoe אֲדָר / Adar io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana ...
Janoary - Febroary - Marsa - Avrily - Mey - Jona - Jolay - Aogositra - Septambra - Oktobra - Novambra - Desambra Tetiandro gregoriana Tetiandro Tetiandro malagasy
Ny Tisry dia volana fahafito ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana voalohany kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atao hoe תִּשְׁרֵי / Tishré na תִּשְׁרִי / Tishrí io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Septambr ...
Ny Nisana dia volana voalohany amin ny tetiandro hebreo ampiasaina amin ny fivavahana jiosy izay anarahana ireo andro firavoravoana ao amin io fivavahana io. Volana fahafito kosa izy ao amin ny tetiandro hebreo ampiasain ny olona andavanandro ive ...
Ny Iara dia volana faha-2 ao aminny tetiandro litorjika hebreo fa volana faha-8 kosa ivelanny fivavahana. Aminny teny hebreo dia atap hoe אִייָר‎ na אִיָּר / ʾIyyār io volana io. Ity volana ity dia manitsaka ny volana Avrily sy May ka misy 29 and ...
Ny Firenena Mikambana dia fikambanana iraisam-pirenena lehibe izay mamondrona firenena miisa 193. Ao aminny firenena mikambana ny firenena rehetra afatsy ny firenena sy faritany tsy manam-pahaleovantena sasany eto an-tany. Misaraka aminny firenen ...
i Faure Essozimna Gnassingbé, teraka taminny 6 Jiona 1966 tany Afagnan, Togo, dia mpanao mpolitika togoley, anisanny zanaky ny filoha taloha Gnassingbé Eyadéma, filohanny repoblika taminny 7 hatraminny 25 Febroary 2005, ary mbola niverina lasa fi ...
Ny tsena maizina dia teny itononana ireo fivarotana ny entana ary raharaha amin’ny fomba tsy manara-dalàna, izay tsy manaja ny fandraiketana ny vidin’entana ary tsy mandoa ny hetra takian’ny governemanta amin’ny vidin’entana. Noho ny endrika tsy ...
Ny oniversite dia fianarana avo lenta, ny tanjony dia manamboatra fahaizana, mitahiry ary mampita azy aminny alalanny karoka. Any Etazonia, i Peirce, folôzôfy amerikana, dia nilaza taminny 1891, fa ny oniversite dia "fikambanana olona omenny fire ...
Ny milionera dia izay olona manana sanda afa-karatsaka na ventim-bola antapitrisany farafakeliny, matetika dolara amerikana na euro. Mety koa hoe manana kaontim-bola na tahirim-bola antapitrisany any amin’ny banky ity olona ity. Araka ny vetim-bo ...
Ny Banky foibe eoropeana dia ny banky foibenny vondrona eoropeana. Ny toerana foibeny dia any Frankfurt am Main any Alemaina. Ny tanjonny Banky foibe eoropeana dia mitazona ny vidinentana hitombina, mba tsy ho mahery ny roa isan-jato ny fiakarann ...
Ny gazety dia fikaratana lahatsoratra atonta aminny taratasy ary avoaka isaky ny tsingerim-potoana, matetika indray isanandro na isa-kerinandro. Manome fampahalalana ary hevitra mikasika ny zava-mitranga ary ny zava-baovao ny gazety. Afaka mividy ...
Ny bakalaorea, aminny rafi-pianarana sasany dia ny mari-pahaizana azo rehefa afa-panadinana aminny fianarana ambaratonga faharoa. Ny teny bakalaorea dia avy aminny teny frantsay baccalauréat izay avy aminny teny latina bachalariatus izay sarangan ...
Ny teny hoe krizy ara-bola dia ampiasaina mba hanonona zava-mitranga mikasika ny krizinny fifanankalozana, ny krizinny banky ary ny krizy ara-borsa.
I Tsetsenia na ny Repoblika Tsetsena dia repoblika ao aminny Federasionani Rosia. Atao hoe Чече́нская Респу́блика, Tchetchenskaya Respublika izy aminny fiteny rosiana fa Нохчийн Республика / Nokhtsiyn Respublika kosa aminny fiteny tsetsena.
Ny Repoblika Entim-Bahoakan i Kôngô izay repoblika faharoan io firenena io dia fitondrana ara-pôlitika tao Kôngô-Brazzaville tamin ny 31 Desambra hatramin ny 15 Marsa 1992. Taorian ny taona 1992 dia niova anarana ho Repoblikan i Kôngô fotsiny ila ...
Ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika dia fanjakana ao Sahara Andrefana izay nanambara ny fahaleovanteny taminny 27 Febroary 1976 taminny alalanny Front Polisario, izay mametraka ny maha masi-mandidy azy aminny tanini Sahara Andrefana nefa tsy ...
Ny teny frantsay no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô no firenena miteny frantsay misy mponina betsaka indrindra maner ...
Ny Serbia, na aminny lafiny ofisialy Repoblikani Serbia, dia firenena ny Eoropa atsimo ao aminny Balkana sy ao aminny eoropa ampivoany ; demokrasia monokameraly ny fomba fitondrany. Mizara sisintany aminny Bosnia Herzegôvina, aminny Kroasia, amin ...
I Zaira na ny Repoblikan i Zaira dia ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô ankehitriny tamin ny Repoblika Faharoa, taminny taona 1971 hatramin ny taona 1997. Izany fari-potoana izany dia mifanandrify amin ny naha filohanny Repoblika an i Joseph-Désir ...
Mikhail Golant dia injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika, Rosia teraka ny 3 Febroary 1923 tao Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika ary maty ny 7 Febroary 2001
Ny fiteny lingala dia fiteny banto tenenina ao amin ny Repoblika Demokratikan i Kongo sy ao amin ny Repoblikani Kongo. Misy 15 tapitrisa eo ho eo ny mpiteny lingala izay nobeazina tamin io fiteny io, fa ny mpiteny lingala dia miisa 20 tapitrisa a ...
I Dagestàna na ny Repoblikani Dagestàna dia repoblika ao aminny Federasionani Rosia. Atao hoe Республика Дагестан, Respublika Daguestan izy aminny fiteny rosiana.
Ny Ady Lehibe Voalohany dia adinny miaramila nisy tany Eoropa taminny 1914 ary tapitra taminny taona 1918. Izy no isanny zava-misy tena nanamarika ny olombelona taminny taonjato faha-20. Betsaka ny olona niady, ny olona maty, sy ny zavatra simba ...
I Patmosy na Patmo dia nosini Gresy ao aminny Ranomasina Egea ao aminny ilany avaratry ny tangoro-nosini Dodekanesa. I Patmosy dia hita ao akaikinny morontsiraka torka, ao atsimonny nosy Samosy. Manana velarana 34 km 2, ary misy mponina 2 400 eo ...
I Akenatôna na Akenatena dia faraô tao Ejipta tamin’ ny Andro Taloha tamin’ ny taona 1350 tal. J.K. hatramin’ ny 1333 tal. J.K. tany ho any, nandritra ny vanimpotoan’ ny Empira Vaovao. Nisafidy ny andriamanitra Masoandro izy hataony fivavahan’ ny ...
I Paoly Apostoly, Apostoly Paoly, Paoly avy any Tarsisy na Paoly dia apostolini Jesosy nefa tsy anisanireo apostoly roa ambinny folo lahy. Mizaka ny zom-pirenena romana izy sady Jiosy fariseo. Talohanny naha apostoly azy dia mpanenjika ny fivavah ...
I Orbano II dia papa tamin ny taona 1088 hatramin ny 1099. Izy no nanambara ny hanaovana ny kroazada voalohany. Teraka tao Châtillon-sur-Marne any Frantsa tamin ny taona 1042 izy ary maty tao Rôma tamin ny taona 1099. I Eudes de Châtillon na Odon ...
I Markiona avy any Sinopesy na Markiona avy any Ponto dia olona nanana ny maha izy azy teo aminny tantaranny fivavahana kristiana taminny Andro Taloha taminny fiafaranny taonjato voalohany sy ny antsasany voalohany aminny taonjato faha-2, izay na ...